NEW YORK - Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, António Guterres ayaa sheegay in weerarkii hoobiye ee shalay lagu qaadey xarunta UN-ka ee Muqdisho ee ahaa mid ula kac ah, isagoo si kulul u cambaareeyay falkan.
Guterres ku tilmaamay weerarka oo lagu dhaawacay labo kamid ah shaqaalaha Qaramada Midoobay iyo qof kale oo qan-daraasle ah mid "xad gudub ku ah sharciga caalamiga ee arrimaha bini'aadanimadda".
Xogyaha Guud ee QM ayaa u rajeeyay shaqaalaha dhaawaca ah soo kabasho deg-deg ah, waxuuna ugu baaqay mas'uuliyiinta Soomaaliya in ay "baaraan weerarka ayna si deg deg ah u keenaan kuwa mas'uulka ka ah caddaaladda,".
Guterres ayaa yiri "ficilada noocan oo kale ah hoos uma dhigi doonaan go'aanka adag ee Qaramada Midoobay ee ah inay sii wado taageeridda dadka iyo xukuumadda Soomaaliya dadaalkooda ku aaddan in ay dhisaan nabadda iyo xasiloonida dalka."
Saacado kadib weerarka hoobiye ee Xarunta UN-ka uu ku leeyahay Muqdisho, Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku amartay Wakiilka QM Nickolas Haysom inuu ka tago dalka, iyadoo ku eedeysay inuu ku xad gudbay qawaaniinta caalamiga ah ee diblomaasiyadeed iyo farageliyay madax-bannaanida qaranka.
Go'aanka lagu eryay Haysom ayaa yimid markii uu Wasaaradda Amniga u gudbiyay qoraal ay soo saareen deeq-bixiyeyaasha, oo ay uga dalbadeen inay jawaabo ka bixiso rabshadii ka dhacay Baydhabo bishii lasoo dhaafay iyo xariga Robow.